လက်ရှိပျံ့နှံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်မှာသူ့အသံအစစ်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံရင်း တသက်လုံး အနုပညာဆက်လုပ်စားလို့ မရတော့ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး – A one
လက်ရှိပျံ့နှံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်မှာသူ့အသံအစစ်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံရင်း တသက်လုံး အနုပညာဆက်လုပ်စားလို့ မရတော့ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး
လက်ရှိပျံ့နှံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်မှာသူ့အသံအစစ်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟဝန်ခံရင်း တသက်လုံး အနုပညာဆက်လုပ်စားလို့ မရတော့ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားအတွက်ပြန်လည်တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်ပြန်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ အမှားများဟာလည်း ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာကိစ္စဖြစ်နေတာကြောင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ရှုံ့ချခြင်းတွေ ခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အသံဖိုင်က ကျွန်တော့် အသံပါဝန်ခံပါတယ်။
အသံဖိုင် က ကျွန်တော့် အသံပါ ဝန်ခံပါတယ် . ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူး . ဘယ်လို စကားလုံးမျိုးမှ မရှိဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ခင်မျာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အရင်းတွေကြီးပဲ ရှိတဲ့ Group Chat မှာ . အားလုံး ထင်မြင်ချက်ကို ပြောကျတယ် .ကျွန်တော့်ကို လည်း ပြောပါ ဆိုတဲ့ အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပါဆိုတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်ပါတယ် .
အဲ့ထဲက တစ်ယောက်က လိုက်ဖြန့်လိုက်တာပါ .မလုပ်သင့်ဘူး . အရှေ့က သီချင်းကိစ္စထဲက စာသားနဲ့ ပြည်သူတွေ ဝိုင်းမုန်းနေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော့်ကို လူသတ်ကွင်းထဲ ထပ်ပိုလိုက်တာ အဲ့သူငယ်ချင်း မလုပ်သင့်ဘူးလိုထင်ပါတယ် .ကျွန်တော် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်.တောင်းပန်လည်း ဘယ်သူ့မှ ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ် . အကြိမ်ကြိမ် လုပ် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်သလို ဖြစ်နေတာလဲ စိတ်ဓာတ် ပိုကျပါတယ် .
ဂီတ သမားတွေကြီးပဲ Group ပရဟိတ Group တခြား နယ်ပယ် အစုံကGroup ပေါင်းများစွာကလည်း ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအရင်း တွေ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ တွေ ရူံ့ချ ပြောဆိုပြီး Group တွေထဲ က ထုပ်ပြစ်ကျပါတယ် . ကျေနပ်စွာ ခံယူပါတယ် ခင်မျာ . ကျွန်တော် အားလုံး ယုံကြည်ချက်ကို ဖျက်စီးတာ မဟုတ်ပါဘူး . နေ့လည်က ဝန်မ်း ညီမလေး တွေအလုပ်ထွက်တဲ့ File လေးတွေ နားထောင်မိတယ် .စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် .
သူတို့လိုအပ်တာတွေ တက်နိုင်သလောက်ကူဖို့လည်း သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက်စီစဉ်နေချိန်ပါ . အလှူ နဲ့ မဖုံးပါဘူး . ဖုံးလို့လည်း မကေနပ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ် . အခု မှ ဒီ စကားပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး . တကယ်ပါ .
ကျွန်တော် လူစကား မပြောမိတဲ့ အတွက် အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ အားလုံး တက်ကြွစွာ လှူပ်ရှားနေတဲ့ အချိန် မကြားချင်တဲ့ စကားကို ကျွန်တော့်ဘက်က ထွက်မိတဲ့ အတွက် အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် .Live လွှင့်ကြည့်ပါတယ် . Line လုံးဝ မကောင်းလို့ပါ .ကျွန်တော့် Ph ကို ဆက်သမျှ လူတိုင်းကိုလည်း ဖုန်းကိုင်ပြီး တောင်းပန်နေပါတယ် ခင်မျာအနုပညာ ဆက်လုပ်လို့လည်း မရတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါပြီ ခင်မျာ 🙏🙏🙏ကျွန်တော် ကံတော်တော်နိမ့်နေတယ် ဆိုပြီး ရေးသားထားပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အောက်တွင် ကြိုက်သလို ရေးသားဝေဖန် နိုင်ပါတယ်နော်။
Source : Yone Lay
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ ပါဝင်မိလို့ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခံရတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားလေး ဆီနွန်…